Amanyathelo ama-7 okudala iVidiyo yokuThengisa iMbulali | Martech Zone
Amanyathelo ama-7 okudala iVidiyo yokuThengisa iMbulali
NgoMvulo, Novemba 20, 2017 Douglas Karr
Sinyusa i Ividiyo evakalayo ngomnye wabathengi bethu okwangoku. Banetoni yeendwendwe eziza kwindawo yabo, kodwa asiboni ukuba abantu bahlala ixesha elide. Isicacisi esifutshane siya kuba sisixhobo esifanelekileyo sokuhambisa ukufumana ixabiso lazo kunye nokwahlulahlula iindwendwe ezintsha ngendlela enomdla.
Izifundo zibonisa ukuba imfuno yabathengi yomxholo wevidiyo inyuke kakhulu, nge I-43% ifuna ukubona iividiyo ezininzi kubathengisi. Iividiyo kunye nomxholo oopopayi babaluleke kakhulu kwinkqubo yokuguqula, nge-51.9% yabathengisi abathi ividiyo ineyona ROI ilungileyo xa kuthelekiswa nezinye iintlobo zomxholo. Ngapha koko, amaphepha okufika kunye nevidiyo akhokelela Ukuguqulwa okungaphezulu kwama-800%. IiCreative
IiMicroCreatives, inkonzo egcweleyo elunxwemeni yoyilo loyilo, yavelisa le infographic yokuqonda Iindlela ezi-7 zokwenza iVidiyo yokuThengisa iMbulali -Oku kufuneka ukuba uncede nayiphi na inkampani okanye uyilo lweprojekthi yokuqala yevidiyo. I-infographic ihambahamba ngamanyathelo ayimfuneko ekuphuhliseni iprojekthi yevidiyo elandelayo.
Nanga amanyathelo angama-7 okwenza iVidiyo yeNtengiso yeKhiller
Misela ividiyo yakho iinjongo kunye nabantu ekujoliswe kubo
Khetha ilungelo uhlobo lwevidiyo umxholo ngenjongo yakho
Yenze iziko ngeenxa zonke ibali lebrendi
Gqiba ukubeka phi ividiyo yakho
Linganisa kwaye uhlalutye ukwenza
Ndiyayixabisa ngokwenyani into yokuba baqala benenjongo engqondweni kwaye baphela ngokulinganisa intsebenzo yomzamo!
tags: kwenziwa kanjaniUkuthengisa ividiyoIiVidiyo zeNtengisoizinto ezincincioffshoreiiphilipinesamanyatheloyoutube
I-Kaleidoscope: Inkqubo eyahlukileyo yeApple yeeFolders, iKhowudi kunye neMifanekiso
Sukuyijongela phantsi Impembelelo yeSitena kunye neVenkile yokuGcina
Nov 23, 2017 ngo-6:25 AM
Umxholo wevidiyo ubaluleke kakhulu kule mihla. Kwaye ukungakhathali kubaluleke kakhulu!